सिक्किमका मुख्य मन्त्रि चाम्लिङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबारे के बाेले ? – Kantipurlink.com
Home > मुख्य समाचार > सिक्किमका मुख्य मन्त्रि चाम्लिङले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबारे के बाेले ?
सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ दिल्लीमा आयोजित नेडा (नर्थ इष्ट डेपलोपमेन्ट एलायन्स) को दोस्रो निर्वाचित सभामा भाग लिन दिल्ली पुगेका छन्। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत पूर्वोत्तर राज्यको मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेका छन्।
नेडाको बैठकमा सिक्किमको लम्बित मागहरूलाई पुरा गरिनुपर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्री चामलिङले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा चलिरहेको आन्दोलन र यसको स्थायी समाधनको माग उठाएका छन्। दार्जीलिङको समस्याको कारण पछिल्लो 33 वर्षदेखि सिक्किमको विकासमा बाधा पुगिरहेको उनले बताएका छन्।
Published On: September 6, 2017 at 6:32 am